सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा खुकुलो बनाइयो, यस्तो अवस्थामा ट्रायल फेल – Purba Aawaj
बिरामी परेकि बालिकालाई सन्चो गराईदिन्छु भन्दै माताले गरिन त्रिशूलले घो”चेर ह”त्या (भिडियो हेर्नुहोस)
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०२, २०७८ समय: ६:३०:३३
लिखित परीक्षाका लागि विभागको वेवसाइटमा प्रश्न राखिएको छ । वेवसाइटमा राखिएका पाँच सय प्रश्न भित्रबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयले २५ प्रश्न निकाल्ने प्रवक्ता डा भुषालले बताए ।
कुन खण्डबाट कति प्रश्न सोधिन्छ भन्ने मापदण्डमा नै उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयले त्यसैका आधारमा प्रश्न छापेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
नयाँ मापदण्डानुसार परीक्षामा पास हुनका लागि चाहिने नम्बर पहिलेभन्दा लिखित परीक्षाका लागि बढाइएको छ भने प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि कम गरिएको छ ।
पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागीले शतप्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्नेमा अहिले ७० ल्याए पुग्छ भने लिखित परीक्षामा पहिले ५० प्रतिशत उत्तीर्ण अङ्क थियो भने अहिले त्यसलाई बढाएर ६० बनाइएको छ ।
परीक्षार्थीलाई सजिलो बनाउनका लागि प्रयोगात्मक परीक्षामा पास गर्न चाहिने नम्बर कम गरिएको हो ।
उनले भने, “लिखित परीक्षामा सीमित प्रश्नबाटै आउने भएकाले उत्तीर्ण अङ्क पहिले ५० भएकामा अहिले ६० बनाइएको छ ।” प्रयोगात्मक परीक्षामा सामान्य खालका गल्ती भइहालेमा पनि सहभागी उत्तीर्ण नहुने गरेकामा अहिले ससाना गल्ती गरे पनि अनुत्तीर्ण नहुने मापदण्डमा व्यवस्था छ ।
पहेँलो धर्कामा छुँदा, एक पटक केही गरी गाडी बन्द भएमा वा मोडमा बत्ती नबाल्दा पनि छुट दिइने व्यवस्था छ । उनले भने, “उकालोमा रोकर अड्याउनुपर्नेमा गल्ती हुँदा भने फेल हुनेछ ।” भारत, चीन, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा भन्दा हाम्रो अप्ठेरो परीक्षा प्रणाली भएकाले परीक्षा प्रणाली केही सजिलो बनाउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।
अरु देशमा ६०÷७० प्रतिशतसम्म पास दर रहेकामा नेपालमा २५÷३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सहभागी पास भएको पाइन्छ । नेपालमा सवारी चालककै कारणले दुर्घटना बढेको भन्दै परीक्षा प्रणाली थप कडा हुनुपर्ने विषय उठिरहँदा विभागले भने यसलाई खुकुलो बनाउन लागेको छ । चालकको व्यवहारका कारण दुर्घटना हुने र दुर्घटनाको परीक्षा प्रणालीमा सम्बन्ध नहुने विभागका प्रवक्ता डा भुषालले बताए । परीक्षा प्रणाली कमजोर हुँदा दुर्घटना बढी हुन्छ भन्ने कुनै पनि अध्ययनले नदेखाएको उनले बताए ।
अहिले पास दर कम हुँदा गैरकानूनी बाटोबाट अनुमतिपत्र लिन खोज्ने प्रवृत्ति रहेकामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सेवाग्राहीले केही गरेर पास गर्न सकिएन भने अलिअलि खर्च गरेर भए पनि पास गरौँ भन्ने सोचाइमा विकल्प खोज्ने प्रवक्ता डा भुषालले बताए । त्यस्तै, पटकपटक एकै जना व्यक्ति परीक्षा दिन जानुपर्दा यातायात कार्यालयमा सधैँ भीड भइरहेको छ । पास हुने दर बढ्दा बजारमा सवारी चालकको कमी हुने छैन । एउटै सेवाग्राहीले उही सेवा सधैँ दिनुपर्दा कार्यालयलाई झन्झट भएको र सवारी साधन चलाउछु भन्नेले चलाउन नपाएको प्रवक्ता डा भुषालले बताए ।
Last Updated on: August 18th, 2021 at 6:30 am
सुर्खेतमा नि’स्सा`सिएर एकैघरका चारको मृ`त्यु
नुवाकोटमा चिकित्सक मृ`त फेला
सानै उमेरमा अर्बपति भएकी महिलाको एउटा सानो गल्तीले गयो ज्या’न !
२.	पर्यटन मन्त्री प्रेम आले सवार गाडी दु’र्घ,टना
३.	बुबाको लाश लिएर मलामी गएका तिन जना छोराको बस दुर्घटना हुदा एकै साथ मृत्यु
४.	पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पुस १८ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
६.	पब्जी खेल्न आइफोन पठाइदिनेसंग भागेकी हवल्दारकि श्रीमती रुँदै मिडियामा आइन (भिडियो हेर्नुस्)
७.	विद्या उप्रेतीले आफ्नो ९ महिनाको गर्भ सहित झु’न्डि’एर आ’त्म’ह’त्या गरेपछि खुलेको र’हस्य(भिडियो हेर्नुहोस्)
८.	मोदीलाई कालो झण्डा देखाउने महिलालाई गो`ली हानियो
९.	७५% सजाय कम दिने प्रलो’भन देखाएर ज’ब’र्ज’स्ती स्वी’कार गर्न लगाए एसपी र असइले (भिडियो हेर्नुस्)
पशुपतिको धर्मशाला देखेर पर्यटनमन्त्री किन भए चकित् ? January 16, 2022
सुर्खेतमा नि’स्सा`सिएर एकैघरका चारको मृ`त्यु January 16, 2022
नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने १३ करोड राजस्व छलेर भाग्न लागेका क्यासिनो सञ्चालकलाई मन्त्री आलेको निर्देशनपछि एयरपोर्टमै लिइयो नियन्त्रणमा January 16, 2022
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, माघ १ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल January 15, 2022
नुवाकोटमा चिकित्सक मृ`त फेला January 14, 2022